Shinoa Glass fitahirizana Sakafo ao an-trano miaraka amin'ny orinasa Airtight Bamboo Lid sy mpamatsy | Hoyer
Fitahirizan-tsakafo fitahirizan-tsakafo amin'ny alàlan'ny rano eny an-tsokosoko an'habakabaka
Azo ampiasaina tsara: ity tavoahangy fitaratra ity dia vita amin'ny vera borosilicate avo lenta amin'ny sakafo, 100% tsy misy poizina ary tsy misy firaka.
Porofon'ny fahalemana: ny fonon'ny kaopy sy ny kaopy hazo dia manamboatra peratra fanidiana silicone manitsy ny lalana rehetra mba hamoronana tontolo iainana sy hamandoana ny rivotra.
Fitaovana fitahirizan-tsofina: ampiasaina amin'ny fitahirizana sy fitahirizana ireo singa isan-karazany, ao anatin'izany ny fitahiry, ny fandroana, ny chutney, ny vary, ny siramamy, ny lafarinina, dite, kafe, zava-maniry, zava-manitra, cookies, sns.
Volume: 1000ml / 35 oz
Haavo: 215mm / 8.5 santimetatra
savaivony: 85mm / 3.4 santimetatra
Tavo masinina famoronana lamaody: manana tanjona maromaro, tsara tarehy ary azo ampiharina. Ny fitaratra kristaly dia ahafahanao mahita izay ao anatiny ary mora hanara-maso foana ianao na efa lany sakafo ianao. Mora diovina izy ireo, haingana ny manitra, manasa, ary mametaka azy ireo amin'ny toerana mafana mba hahamontsina, avy eo dia napetrany ao anaty siny ireo entana efa voaomana. Ny lamba vita amin'ny hazo dia tsy maintsy hosasana tanana fotsiny.
Ny fanomezana fahafaham-po: manome koa anao antoka antoka manome fahafaham-po afa-tsy 100% ianao, izay azonao vidiana amim-pahatokisana. Raha manana fanontaniana ianao dia miangavy anao hifandray aminay ary hanao izay azonay atao izahay mba hampifaliana anao.
Matanjaka fanampiny: Vita amin'ny vera borosilicate ambony. Tsara fanisiana tombo-kase, hafanana ary fanoherana mangatsiaka, fanoherana asidra sy alkali, fanoherana ny fanoherana ny asa tsara kokoa. Ny siny rehetra dia tsy misy tomika ary tsy misy poizina, ka izany no safidy mahasoa ho an'ny fitahirizana ny sakafo.
Mandrakotra ny volotsangana voajanahary: Ny tombo-kase silicone eo amin'ny molotra volotsangana dia misidina anaty rivotra, mamorona tontolo iainana amin'ny rivotra izay manambina hatrany ny sakafoo mandritra ny fotoana maharitra. Noho ny asa tsara, afaka manokatra mora foana ianao ary manidy ilay siny.
Endrika ivelany: Azonao atao ny manokatra na manidy ny sarony ao anatin'ny fotoana fohy. Ankoatr'izay, azonao atao ny mifehy ny fidina araraka ary fantarinao hoe mandalo mivantana amin'ny fitaratra mangarahara, izay tena mora.
Mora diovina: Kapo ny lamba vita amin'ny lamba feno lamba mando na sasao amin'ny rano. Azonao alaina mora foana ny silicone.
Safidy tsara: Ny fitahirizana sakafo amin'ny ankamaroany dia mora ary mahomby amin'ny sehatra. Ireo masinina fitahirizan-tsaramaso ireo dia hanadio ny tranonao.
Size Boky: 260/450/500/600/650/750/900/1000/1200 ml Haavony: 11 / 11.5 / 12/11 / 16.5 / 16.5 / 16 / 21.5 / 21 cm Diameter: 6.5 / 8 / 8.5 / 9.5 / 8 / 8.5 / 9.5 / 8.5 / 9.5 cm Boky: 9.1 / 15.8 / 17.6 / 21.1 / 22.9 / 26.4 / 31.7 / 35.2 / 42.2 oz Haavony: 4.3 / 4.5 / 4.7 / 4.3 / 6.5 / 6.5 / 6.3 / 8.5 / 8.3 santimetatra Diameter: 2.6 / 3.2 / 3.4 / 3.7 / 3.2 / 3.4 / 3.7 / 3.4 / 3.7 santimetatra
Previous: Fitahirizam-bary fitahirizam-bidy amin'ny alàlan'ny fizahana tariby fitotoana
Manaraka: Tsara ny lakozia fitaratra tsara tarehy miaraka amin'ny Stainless vy Lid
siny tavoahangy sakafo
siny siny fitahirizana sakafo
siny fitahirizana fitaratra
siny fitahirizana fitaratra ho an'ny lakozia